कर्णाली सरकारले कोहलपुर-हिल्सा सडक निर्माणका लागि पहल गरेको छ । सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसित स्वीकृति मागेको छ । सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतीका लागि दाताहरु सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै कर्णाली सरकारले लगानीका लागि स्वीकृती दिन केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आइतबार बसेको कर्णाली ... ....
आधारशीला काव्य प्रवाहको १६ औं शृंखला सम्पन्न भएको छ । शनिबार नयाँबजार, नर्सरी चोक (काठमाण्डौ) स्थित कलेजको सभाहलमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । आधारशीला काव्य विभागकी अध्यक्ष कौशिला रिसालको अध्यक्षता र सचिव सुगिता शाहको सञ्चालनमा काव्य प्रवाहको १६ शृंखला भएको हो । कार्यक्रमका प्रमूख अतिथी प्रगतिशि ... ....
पाँच श्रष्ट्राका रचना वाचन सहित शनिबार बनेपामा काव्य गुञ्जन शृङ्खला -४ सम्पन्न भएको छ । हातेमालो साहित्य संगम काभ्रेको सहकार्यमा काव्य गुञ्जनको त्रैमासिक विशेष वाचन शृङ्खला कविता, गजल, मुक्तक सुनाउँदै सकिएको हो । डायस्पोराका पहिला कवि समेतको पहिचान बनाएका काभ्रे मण्डनदेउपुरका डा. गोपाल पौड्याल (कवि ... ....
गजल: कोही मनका अति अति नै राम्रा देखिए ...
कोहि मनका अति अति नै राम्रा भेटिए कोहि मानिस भित्र भेडा बाख्रा भेटिए महल भित्र सुनिए नाता टुटेका कथा जिवन्त प्रेमको शिक्षा दिने छाप्रा भेटिए कतै दुइ मुटु गाँसिएर एउटै थियो कतै एउटै मुटुको दस टुक्रा भेटिए मन साटुन्जेल एक अर्कामै सिमित प्रेम तन साटेपछी सडकमा जात्रा भेटिए जवानिको प्यास समयले लुटेपछ ... ....
निमग्ना घिमिरेका चार प्रेमिल मुक्तक
दूर -दूर भइयाे अति, अब समीपमा सराैं न हुन्न र ? जीवनका उकाली र अाेराली सँगै झराैँ न हुन्न र ? न त तिम्रो एकल, न त मेराे एकल शासन यहाँ अब मिलीजुली सरकार गठन गराैँ न हुन्न र ? मुक्तक: दुई जब दुई नजरमा नजर मिलायाै तिमीले । मायाकाे मिठाे अनुभूति दिलायाै तिमीले ।। एक्लाे यात्री थिएँ म जीवनमा हिजाेसम् ... ....
शान्ति शर्माको 'अम्लान फूल' लाई गजलश्री !
कविता: हामी सबै मान्छे हौं
बलात्कार विरुद्ध सुगिता शाह, कवितामा आक्रोशको आगो